Zimbabwe Yosvitsa Makore Makumi Mana Yawana Kuzvitonga, Asi Vanhu Vachishupika Kudarika Nyika Isati Yozvitonga
Zimbabwe Independence Celebration @ 39 2
Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana neMugovera kubva nyika yawana kuzvitonga, vakawanda vachichema nerekuti hurumende yeZanu PF iri kurasa zvinangwa zvakaita kuti vanhu vaende kuhondo kunorwira rusununguko rwenyika.
Vanhu vakawanda vataura neStudio7 vanoti havana chekupemberera mukusununguka kwenyika sezvo zvakaenderwa kuhondo zvisiri kuzadzikiswa.
Amai Janet Kanavete, vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights Association, vanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzeveruzhinji munyika ndiko kunoita kuti vasaone rusununguko rwenyika.
Amai Kanavete vanotiwo veruzhinji vari kununga svosve nemuromo munyika kunyangw hazvo chimwe chakaenderwa kuhondo yaive nyaya yekuti hupfumi hwenyika hubatsire vanhu vese.
Mutauriri wevechidiki muMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa , VaStephen Chuma, vanoti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa, sarudzo dzemunyika dzinogaroita mutauro, hupfumi hwenyika huri kuenda kumawere, izvo zviri kupa kuti veruzhinji, kusanganisira vechidiki, vanonge svosve nemuromo.
Mumwe muzvinafundo, Dr Tinashe Mawere, vanotiwo nyika yakarasa gwara rehondo iro raive nechinangwa chekupedza hurombo, uhwo hwatonyanya kuwedzera munyika. VaMawere vanoti zvizvarwa zvenyika zvine dzidzo zviri kubuda munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika, sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanoti kunyange hazvo kune zvakagonekwa munyika zvakadai sekupa mukana wekuti vanhu vavhotere mutungamiriri wavanoda, nyaya dzenyunyuto nguva dzese dzinoitwa sarudzo, zvinhu zvinodzorera mashurenyika. VaMtata vanotiwo Zimbabwe iri kutadza kuita zvinhu zvakawanda zvinoita kuti hupenyu hwemunhu wese huve hwakanaka
Asi mushandi mukuru anoona nezvekubuditsa kwemashoko mubato reZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti zvinhu zvizhinji zvakaenderwa kuhondo zvakazadzikiswa sezvo vanhu vatema vava nemapurazi, uye munyika muchiitwa sarudzo dziri kutambirwa nenyika dzakapoteredza Zimbabwe.
VaMugwadi vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa neavo vasingadi budiriro yenyika pamwe nezvirango zvehupfumi zvavati zvakatemerwa nyika
Asi dzimwe nynazvi munyaya dzehupfumi dzinoti, Zimbabwe, iyo yaive hurudza munyaya dzekurima, yakatadza kuronga zvakanaka hurongwa hwayo hwekuendesa ivhu kuvatema, sezvo chirongwa ichi, chabatsira vashoma, zvikuru vakuru vakuru muZanu PF, avo vane mapurazi anodarika rimwe chete, pamunhu mumwe chete.
Nyanzvi idzi dzinotiwo kutadza kutonga kwehurumende yeZanu PF ndiko kuri kupa kuti zvinhu zviende kumawere muZimbabwe.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Va Nick Mangwana, vanoti pane zvinhu zvakawanda zvakagona kuitwa nehurumende zvinosanganira kutora ivhu, kupa hupfumi kuvanhu, dzidzo nezvimwewo.
Asiwo VaMangwana vanoti nyika inofanirwawo kugadzirisa nyaya yehuori kuitira kuti nyika inyatsofamba mugwara, pamwe nekugadzirisa zvimwe zvichiri kunetsa munyika.
Zimbabwe, iyo yakawana kuzvitonga musi wa 18 Kubvumbi 1980, iri kucherechedza kekutanga, kuwana kwenyika kuzvitonga, vanhu vakagara mudzimba dzavo, senzira yekudzivirira chirwere cheCoronavirus, icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose.